I-Florida Mining Operation Isebenzisa i-Bucketwheel Dredge ukumba i-Ore
Source: Ukuvuselelwa Komhlaba Kwamanye Amazwe
I-Associated Minerals Corp. isebenza ngebhakede lamabhakede eGreen Cove Springs, eFlorida, eningizimu neJacksonville. I-dredge "Rocky Ford" imba isihlabathi esithwala amaminerali esiqukethe i-rutile, i-zircon, ne-ilmenite.
I-dredge isebenzisa iphampu engama-22-intshi. Abasebenzi abayi-108 basebenza lapho beya khona, isigayo esimanzi ngemuva kwesihlahla, isigayo esomile enkampanini yenkampani kanye nehhovisi. I-dredge isebenza amashifu amathathu amahora ayisishiyagalombili ngosuku, izinsuku ezingama-363 ​​ngonyaka. I-dredge iya kancane kancane idabule idiphozi, esepulazini lesihlahla se-Union Camp. Izihlahla ziyavunwa bese kuthiwe ingaphezulu lomcaba bese ligcinwa ngaphambi kwembesa. I-sandwheel dredge ibhula isihlabathi esimnyama, ishiye idiphozi emhlophe emhlophe, efakwe emgodini, embozwe ngenhlabathi futhi itshalwe otshanini.
Indawo yezokumbiwa ibanga elingamakhilomitha amahlanu ukusuka esakhiweni sendlunkulu, ezansi nemigwaqo yezwe, edlula epulazini lezihlahla futhi ingena endaweni enqunyelwe lapho ubumbano lwalungabonakala lodwa echibini elizenzele lona. I-dredge yenza i-lateral idlule i-1,000 iye ezinyaweni ze-1,200 ubude, idonswe izintambo ze-anchor.
Umvubukuli wamabhakede umba phansi kwebhange, efaka ebhange ukuze ahlangane nezimbiwa. Ngebhakede, umba amathani we-900 kuya kuma-1,200 ngehora, elihumushela kumathani we-20,000 ngosuku namathani ayisigidi eziyisikhombisa ngonyaka. I-AMC ithenge ibhakede lebhokisi le-500 HP kwa-Ellicott® Umshini weBaltimore ukuze ungene esikhundleni se-1200 HP cutterhead. I-Ellicott® i-brand bananawheel dredge ngaphandle-ikhiqiza umgubho wangaphambilini ngabangaphezu kuka-2: 1 yize kungaphansi kwengxenye ukusetshenziswa kwamandla.
Okokusebenza kufakwa phezulu kwesigayo esimanzi esinezitezi ezine ezilandela ukubola, kudlule ngommese okhipha ubukhulu, bese kudlula amasethi amathathu omoya ahlukanisa amaminerali asindayo acishe abe ngamaphesenti angama-85. Amaminerali agcinwe kude ngamamitha angu-4,800, afakwa ngepayipi le-polyethylene engamasentimitha ayisithupha kusetshenziswa amaphampu ama-5X4 three. Amaloli ayiyisa esigayweni esomile lapho inhlanganisela yamandla adonsela phansi namandla kagesi ehlukanisa amaminerali.
Umphathi wokusebenza kweqembu wachaza ukuthi idiphozi yindawo yolwandle lwasendulo lapho amachilo ayephonswa khona emgodini omkhulu emlonyeni womfula. Idiphozithi isuka kwimayela elilodwa-nanhlanu kuya kumayela ububanzi, i-35 izinyawo ezijulile futhi iqukethe amathani ayizigidi ezingama-100 ore. Ugu lolwandle lwakudala manje selungamamayela angama-15 phakathi nezwe.
Izincwadi zenkampani zibeka umkhiqizo wonyaka wokusebenza kweFlorida kumathani angama-30,000 we-rutile, amathani angama-35,000 we-zircon namathani angaphezu kwama-60,000 ama-ilmenite, kanye namanani amancane we-leucozene, i-monazite ne-staurolite. Ikhwalithi yamaminerali iphakeme kakhulu, kanti i-zircon isezingeni lokuhlanzeka elifanele izinhlelo zokusebenza ezibucayi kakhulu ze-ceramic.
I-Associated Minerals ingenye yezinkampani ezinkulu kakhulu zamaminer sand sand emhlabeni. Le nkampani iyingxenye yeRGC Ltd. (iRenison Goldfields).
Ishicilelwe kabusha ekubuyekezweni kokudonswa komhlaba jikelele